Ogaden News Agency (ONA) – Qaniinyaa Qaniinya Kaa Fujisa, Adkaysiguna waa Furaha Guusha – Noora Afgaab
Qaniinyaa Qaniinya Kaa Fujisa, Adkaysiguna waa Furaha Guusha – Noora Afgaab
Posted by ONA Admin	/ May 26, 2016
Cabdilbaari Cadwaan (عبد الباري عطوان) oo ah qoraa dalalka Carabta aad looga akhristo maqaalaalkiisa ayaa 5an maalmood markuu socday dagaalkii Gaza yidhi; Haduu ahaa hadafka Israaiil dagaalka ay ku soo qaaday Gaza inay go’doomiso Xamas, ama curyaamiso dhaqanka Iska-caabinta (ثقافة المقاومة), oy jilbaha dhulka ugu dhufato ama ku rido ree Gaza argagax ay la cabsadaan, waxaa hubaal ah ilaa hadda inuu fashilmay hadafkaasi. Shan maalmood oo dhulka, cirka iyo baddaba lagaga qaraacay Gaza hubka noocyadiisa kala duwan, ujeedadii dagaalkaa laga lahaa midkoodna kama hirgalin, waxaana muuqda natiijo ka duwan midii laga filayay.
Afti ay jariidada Israaiil ugu codka dheer ee Hareetz ka qaaday dadweynaha, waxay isku raaceen in ka badan 54% in dagaalkii Gaza ku dhamaaday guuldarro oon laga adkaanin Xamas iyo khasaare xoogan oo soo gaadhay ciidanka Israaiil iyo dhaqaalaha dalkaa.
Markii heshiiskii xabbad joojinta ay kala saxiixdeen Xamas iyo xukuumadda Israaiil, waxaa durbadiiba ka dhex bilowday is-eedeyn jeneraaladii, iyo wasiiradii Israaiil, kuwii hore iyo kuwii dagaalka hogaaminayay. Shabakadda al-monitor.com ayaa soo qortay warbixin sir culus ahayd, oo masuulka habsami u socodka hawlaha xukuumada (State Comptroller) u gudbiyay 40 ka mid ah janaraalada sare ee ciidanka Israaiil oo uu ku daleeceeyay habkuu dagaalka u socday iyo ceebta ka raacday ciidamada Israaiil. Warbixinta masuulkan waxay keentay in midba midka kale uu dusha ka saaro qasaaraha soo gaadhay ciidanka iyo haybadiisiiba. Warbixinta ayay shabakadda ku gabagabeysay; Is-eedeyntan waxay timid markii ciidan balaadhan oo aad u hubaysan una tababaran ay 51 maalmood dhaafi kari waayeen ciidan yaroo meel ku oodan, iyadoo dagaalkii lasoo afjaray ciidankii Qasam oo weli ku ridaya sawaariikhdii caasimadda Tel Aviv.
51maalmood ayuu caalamka dhab ahaan (Live) u daawanayay dagaal naxariis darra ah oo shacabka Gaza lagu qaaday, oo loo adeegsaday hubka ugu casrisan ciidamada caalamka. Ujeedada looga aamusayna waxay ahayd, iyadoo la filayay inuu noqon doono dagaalkan 2014ka midkii ugu dambeeyay oo ciidamada Israaiil ay quusin doonaan ree Gaza. Inay laba mid un noqoto ayaa la filayay. 1- In fidaa’iyiinta (N/hurayaasha) Xamas la baabi’yo, inta soo hadhana laga saaro Gaza. 2- Ama inuu shacabka Gaza xamili kari waayo dhibka haysta ee cunaqabataynta iyo dagaalada naxariisdarada ah, ka dibna ay ku gadoodaan Xamas iskana saaraan. Labadaa midna ma dhicine wuxuu dagaalkii ku dhamaaday N/hurayaashii Al-Qasam oo guul ku damaashaadaya iyo ciidamadii Israaiil oo waji gabax iyo guuldarro lasoo noqday. Ciidamada Israaiil waxaa la faray inay kasoo baxaan Gaza iyagoo calama waaweyn lulaya oo dhoola cadaynaya si aanu shacabka Israaiil u mooraal jabin, hasa ahaatee, waxaa adkaatay in laga qariyo shacabka inay Xamas ku qasabtay R/wasaare Natinyaaho inuu ogolaado shuruuda xabbad joojinta ay dalbadeen Xamas.
Ma’aha arin sahlan inuu shacab yar oo dhowr iyo toban sano meel lagu soo ooday u adkaysto cunqabatayn aan horey uga dhicin caalamka, iyagoo waliba walaaladoodii Carbeedna ay dhabarka u duween, qaarkoodna ula soo safteen cadawgoodii. Waxyaabaha mucjisada ah ee lala yaaban yahay waxaa ka mid ah siduu ku awooday shacabkaasi inuu dhiso ciidan N/hurayaal mintid ah oo gacantooda ku samaysanaya hubka iyo rasaasta ay u baahan yihiin, gaar ahaan sawaariikhda ay ka argagaxeen shacabka Israaiil oo markii ugu horeysay taariikhda dalkaa ku qasbtay inay xidhaan garoonadii dalkaa uu lahaa. Si loo fahmo mucjisadaa, waxay u baahantahay in laga sheekeeyo labada garabee iskaashanaya oo Gaza kuwada nool. Waa shacabka Gaza iyo wiilashooda N/hurayaasha ah ee Cizadiin Al-Qasam.
Hadaan ku horeeyo Fidaa’iyiinta Cizadiin Al-Qasam iyo guusha ay gaadheen ee caalamka ka fajiciyay, waxaan odhan karnaa waxaa asaas u ah oy halku-dhig ka dhigteen dhalinyarada Gaza falsafadda ah – Argagixin Dheelitiran (Balanced Terror توازن الرعب ), taasoo la mid ah maahmaahda Somaliyeed ee ah –Qaniinyaa Qaniinya kaa Fujisa -. Waxaa loola jeedaa in xanuunka dagaalka uu cadawgana dareemo, oo aanay noqonin xanuunkaasi mid ku kooban shacabka ree Gaza. Waa in shacabka Israaiil dareemaan inuu dhibaato u keenay dagaalka oo godadka (Bunkers) galaan. Adkaysiga iyo sabirka loolama jeedo in lagu dharbaaxo marwalba ood hoos u ooydo. Waa inaad adigana kolba intaad awoodo dherbaaxdo cadawga ood xanuujin karto.
Gaza sidaan soo sheegnay irid walba waa laga ooday. Hadday noqoto dhulka labadii albaab ee u furnaa waxaa kala xidhey Israaiil iyo Masar, hadday noqoto badda maraakiibta dagaalka ee Israaiil ayaa ku xeeran oo looma ogola inay dhaafaan 3ex kilomitir, haday noqoto cirka garoonkii dayaaradaha waa la burbiriyay loomana ogola inay dayaarad ka dagto. Waxaa la filayay siday u qorsheeyeen kooxdii afar-geesoodka ahayd (Middle East Quartet) inay sanad ka dib ree Gaza kabaha madaxa soo saaraan oo iyagoo gaajaysan ay saxiixaan wax kasta oo laga dalbado. Waxaanay xisaabta ku darsan Iraada-da birta ah ee ree Gaza oon ogolayn inay duruufta u liicaan oy isu dhiibaan cadawgooda ama ka tanaasulaan hadafkay lahaayeen. Waa waqtiga loo baahan yahay inay shaqeeyaan maskaxda iyo awooda umadda oo iskaashaday. Waxaa lakala dooransiiyay dhalinyarada hubka qaaday inay xal keenaan ama hubka dhigaan oo cadawgooda mindida u lisanaya isu dhiibaan. Waxay dhalinyaradii la yimaadeen xal uu ka shalaayey cadawga, oy dhaheen waxaa noo dhaantay in aan xadka laga xidhin. Sababtoo ah haddii markii hore waxa soo galaya Gaza iyo waxa ka baxayaba ay la socdeen oo custom-ka lagu baadhi jiray, hadda waxay noqotay in dhulka hoostiisa ay waxwalba soo mariyaan, iyadoon la baadhin.
Markii wax walba oo nolosha looga baahnaa laga mamnuucay inay galaan Gaza, waxay dhalinyardii iyo maal-qabeenkii Gaza ku heshiiyeen in dhulka hoostiisa laga samaysto wadooyin ay badeecadda iyo dadkaba mari karaan. Laba guri oo labada dhan kaga kala yaala xadka u dhexeeya Gaza iyo Masar oo meelaha qaarkood isu jirta 1000mitir ayay ka dhiseen wadooyin ilaa 30mitir dhulka hoostiisa maraya. Dhalinyara badan ayuu kusoo dumay godka ay qodayeen oo halkaa ku aasmay, qaar ayaa markii la ogaaday ay ciidanka Masar ama kuwa Israaiil ku dumiyeen godka ama ku buufiyeen sun ama biyo. Waxay dhalinyaradii Gaza iyo N/hurayaasha Al-Qasam ka dhiseen dhulka hoostiisa wadooyin iyo maqaasiino iyo warshadaha hubka lagu sameeyo. Wadooyinka (tunnels) qaarkood ayaa la gaadhsiiyay magaalooyin ay dagan yihiin Yuhuda iyo xeryaha afaafka (Outpost) ee ciidanka Israaiil. Sarkaal Yuhuud ah oo wax laga weydiiyay dagaalkii Gaza ay ku qaadeen 2014kii ayaa ku jawaabay; Dagaalka ku xiga waxaan ku dagaalami doonaa anaga iyo Xamas dhulka hoostiisa.
Halkaa waxay ku muujiyeen ree Gaza inay yihiin shacab leh Iraada bir ah oon ogolayn inay u joojoyaan halgankooda duruufaha uu gumaysiga abuurayo darteed.
Waxaan ku eegi doonaa qaybaha ku xiga siday ku awoodeen N/hurayaasha Al-Qasam Argagixin Dheelitiran (Balanced Terror توازن الرعب ). La socda.